Labo arrin midkood 'oo xal u noqon kara' dilka ka socda magaalada MUQDISHO - Caasimada Online
Home Warar Labo arrin midkood ‘oo xal u noqon kara’ dilka ka socda magaalada...
Labo arrin midkood ‘oo xal u noqon kara’ dilka ka socda magaalada MUQDISHO
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya, ahna haatan ergayga gaarka ah ee Geeska Afrika, Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed ee Soomaaliya, Mudane Yuusuf Garaad Cumar ayaa soo bandhigay labo arrin oo midkood xal u noqon karto dilalka kusoo badanaya magaalada Muqdisho.
Yuusuf Garaad oo ka hadlay dilkii Agaasimihii Radio Muqdisho, Cabdicasiis Maxamuud Guuleed “Afrika” oo habeenkii Sabtidii weerar ismiidaamin ah lala beegsaday ayaa waxaa uu sheegay in Al-Shabaab ay falalkaas u aragto libin.
Waxa uu sheegay in xiligeedii la joogo sida uu qabo in lala heshiiyo kooxda Al-Shabaab, si xal loogu helo islamarkaana meesha looga saaro dilka ay fuliso kooxdaas oo inta badan Xamar uun ah.
Sidoo kale waxa uu ku taliyay in midda hore haddii ay suurtagali weyso si dhab ah la isaga dhiciyo oo loo wada jeesto dagaalka ka dhan ah, si looga keeno mira-dhal xasilooni amni u horseeda dalka.
Yuusuf Garaad ayaa qaba haddii labadaas arrin midkood laga dhabeyn waayo in Al-Shabaab ay sii wadi doonto dilalka qorsheysan iyo qaraxyada oo ay inta badan ku baxaan shaqsiyaad muhiim ah iyo shacab.
Dilalka iyo qaraxyada qorsheysan ee Al-Shabaab ay fuliso ayaa markale muddooyinkii dambe kusoo badanayey dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho, kaasi oo ugu dambeeyay mid saaka ka dhacay wadada Cabdiqaasim ee degmada Hodan, oo ay ku dhinteen ugu yaraan illaa 8 qof, halka ay ku dhaawacmeen 17 kale oo u badan shacab xiligaas marayey wadada dhinaceeda.